ကဏ္ဍစုံ ပြခန်း: ပုလင်းတစ်လုံးကို ဖြန့်ကျက်တွေးမိသော အတွေးစလေးများ
ပုလင်းတစ်လုံးကို ဖြန့်ကျက်တွေးမိသော အတွေးစလေးများ
ညချစ်သူ | 2:54 AM | အတွေးရသစာစု
ညချစ်သူ | 2:54 AM |
သူငယ်ချင်းအားလုံးပဲ မဂ်လာပါဗျာ ။ကျွန်တော်လည်းစာမရေးရတာကြာပြီဆိုတော့ ဒီနေ့ တော့ နေလည်က အားတုန်း အခွေကြည့်မိတာလေးကို ဖြန့် ကျက်တွေးမိတာလေးတွေ ရေးချင်လာလို့ရေးလိုက်ပါတယ် ။
သူငယ်ချင်းအားလုံးပဲ အားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ ။
နေလည်က ကြည့်မိတဲ့ဇာတ်ကားလေးကို သူငယ်ချင်းတို့ လည်း ကြည့်ဖူးကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် ။
ဇာတ်ကားလေးနာမည်က The Gods Must Be Crazy 1 ဆိုတဲ့ကားလေးပါ အဲ့မှာပါတဲဇာတ်ဆောင်ကတော့
အများသိတဲ့ အာဖရိကသားကြီးပေါ့ ။အဲ့ဇာတ်ကားမှာ အာဖရိက က လူမျိုးစုတွေ နဲ့ တိုးတက်နေတဲ့ ကမ္ဘာ
က လူတွေအကြောင်းကို ယှဉ်တွဲဖော်ပြထားတာကို တွေ့ မြင်နိုင်မှာပါ ။
ကျွန်တော်တွေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကတော့ အာဖရိကကို ရောက်လာတဲ့ ပုလင်းတစ်ခု စတင်တယ် ပြောရ
မှာပဲဗျ ။အာဖရိကအပေါ်ဖြတ်သန်းသွားလာနေတဲ့ လေယာဉ်ကနေ ပစ်ချလိုက်တဲ့ ပုလင်းတစ်ခုက Crazy
မင်းသားကြီး အနားကျလာတာကနေ ဒီအတွေးလေးကို စတင်စဉ်းစားမိတာပါ ။မိုးပေါ်ကနေ ကျလာတဲ့
ပုလင်းလေးက အာဖရိက က လူသားမျိုးနွယ်တွေအတွက် အကောင်းတွေသယ်ဆောင်လာတာလား ?
အဆိုးတွေကိုပဲသယ်ဆောင်လာသလား ? ဘယ်လိုကောအသုံးဝင်တာလဲ ? အာဖရိက မျိုးနွယ်ကလူတွေ
အမျိုးမျိုးစမ်းသပ်နေကြပေမဲ့ ဘာအတွက်သုံးမှန်းမသိခဲ့ကြဘူး။ပုလင်းလေးနဲ့ ဂီတသမားကသံဇဉ်ရှာကြည့်
တယ် ဒါလည်း အသံထွက်လာတာပဲ ၊ မိန်းမတွေက အခြားအိမ်သုံးအဆောင်တွေ အတွက် အသုံးပြုကြည့်
ကြတယ် ဒါလည်း အသုံးဝင်နေသေးတာပဲ ။နောက်ဆုံးတော့ အသုံးဝင်တာတွေများလာလို့အားလုံးက
ပုလင်းတစ်လုံးကို ၀ိုင်းလုလုပ်နေတဲ့အဆုံးမှာ ရန်ဖြစ်စကားများလာကြပြီး အချင်းချင်းရန်ဆောင်လာတာကို
မဖြေရှင်းနိုင်မှာဆိုးပြီး ပုလင်းလေးကို မူလလားရာနေရာဆီ လူမျိုးစု အကြီးအကဲကကျွန်တော်တို့ ဇာတ်လိုက်
ကျော်ကြီးကို ပြန်ပို့ ခိုင်းလိုက်တယ် ။
ဇာတ်လမ်းကတော့ အရှည်ကြီးပေါ့နော် အခြားအခြားသော အကြောင်းအရာတွေလည်း ပါသေးတယ် ။
တိုးတက်နေတဲ့ ကမ္ဘာက လူတွေက ခေတ်မှီစက်ကရိယာတွေ အသုံးပြုနေပုံတွေ အဲ့အချိုရေ ပုလင်းလေး
ပုံမျိုး အခြားအရာဝတ္ထုအမျိုးမျိုးကို ခေတ်မှီဆန်းပြားစွာ ထုက်လုပ်အသုံးပြုနေပုံ အကြောင်းအရာ အစုံအလင်
ပေါ့ ဗျာ ။
အဲ့နေရာမှာ ကျွန်တော်တွေးမိတာက ပုလင်းလေးအကြောင်းပါ ။ရေမြေတောတောင်ခတ်ခဲကြမ်းတမ်းပြီး
သွားလာရခတ်ခဲတဲ့ အာဖရိက က လူမျိုးစု မျိုးနွယ်များဟာ စာသင်ဖို့ ဆိုတာ ဝေးလို့ဘ၀ကို ခတ်ခဲကြမ်း
တမ်းစွာ ဖြတ်သန်းရပုံကိုလည်း ဂရုဏာသတ်စွာ တွေ့ မြင်ခံစားရပါတယ် ။ထိုအတူ စာမတတ်လို့ဘာမ
ဟုတ်တဲ့ ပုလင်းလေးတစ်ခုကို ပြဿနာတစ်ခုအဖြစ်ထင်ပြီးအမျိုးမျိုးလိုက်တွေးနေကြတာလို့ထင်ပါတယ် ။
ဒီအာဖရိက မျိုးနွယ်စုတွေလိုပဲ ကျွန်တော်တို့ တွေလည်း ကိုယ်မတတ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကို ပြဿနာတစ်ခုလို
လိုက်လံဖြေရှင်းနေကြရတယ် ။ တတ်သိတဲ့ လူတွေကတော့ အသေးအမွှားကိစ္စအဖြစ် ထားလိုက်ကြတယ် ။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဘ၀မှာ ကိုယ်သင်ယူနိုင်သမျှပညာတွေကို အပက်တကုတ် ရှာဖွေသင်ယူနိုင်
ကြမယ်ဆိုရင် ပြဿနာတွေအဖြစ် မသတ်မှတ်တော့ပဲ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ကိစ္စတစ်ခုအဖြစ် သာ တွေးနိုင်ကြ
လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ် ။
ကျွန်တော်တို့ ဘ၀မှာလည်း မသိခြင်းတွေကို လိုက်လံရှာဖွေခြင်း ၊ စူးစမ်းလေ့လာရင်း ၊ နဲ့ သာ
အချိန်တွေက ကုန်မှန်းမသိကုန်လာခဲ့ကြတယ် ။ ဘ၀ဆိုတာ လမ်းမရှည်ကြီးတစ်ခုနဲ့ တူတယ်။
အဲဒီလမ်းက မသိခြင်း၊ အံ့သြခြင်းတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတယ်။ ဘ၀ဆိုတာ ပုဒ်စာတစ်ပုဒ်လိုပဲ ရွေးချယ်
တာနောက်လိုက်ပြီး ကြုံတွေ့တာတွေ ကွာခြားသွားတယ်။ ဘ၀ဆိုတာ ၀င်္ကဘာတစ်ခုနဲ့တူတယ်။
ထွက်လမ်းတွေကို မပြတ်ရှာရင်း ကိုယ်နဲ့သင့်တော်မယ့်လမ်း တစ်ခုကို ရှာကြရတယ်။
ပြဿနာဆိုတာ ကိစ္စရပ်တွေက သယ်ဆောင်လာခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ ပြဿနာ ကိစ္စရပ်တွေအပေါ် ကိုယ်မြင်တဲ့အမြင်ကနေ ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။တစ်ခြားရှုထောင့်ကနေ ကိုယ့်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရင်
ဘဝကိုသက်တောင့်သက်သာ ရင်ဆိုင်နိုင်မယ်၊ ဘဝကို သတ္တိရှိရှိ ရင်ဆိုင်နိုင်မယ်၊ အောင်နိုင်မယ့်
သင်ခန်းစာမျိုး၊ အောင်မြင်မှုမျိုးကို ရှာတွေ့နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ လူ့ဘဝရဲ့ ရင့်ကျက်မှုကို တွေ့နိုင်မှာဖြစ်တယ်။
Posted by ညချစ်သူ at 2:54 AM